Dhoolatus ay ka qeybgalayaan ciidamada Booliska Soomaaliya ayaa ka dhacaya dalka Uganda – idalenews.com
Dhoolatus ay ka qeybgalayaan ciidamada Booliska Soomaaliya ayaa ka dhacaya dalka Uganda
Ciidamada Booliska Soomaaliya ayaa ka qeybgalay dhoolatus ciidan oo ay si wadajir ah u qabteen booliska 12 dal oo ku yaal qaarada Afrika iyadoo dhoolatuskan lagu qabtay Namboole ee dalka Uganda.
Dhoolatuskan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay Urur ay ku bahoobeen madaxda ciidamada Booliska ee wadamada ku yaal Bariga Afrika ee (EAPCCO). Waxana dhoolatuskan uu yahay mid lagu soo bandhigayo awooda ciidamada Booliska ee loogaga hortagayo argagaxisada.
Wadamada ka mid ah ururka (EAPCCO)kana qeybgalaya dhoolatuska ayaa waxaa ay kala yihiin Burundi, Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Rwanda, Seychelles, Somalia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Uganda.
Isagoo ka hadlayay shir jaraa’id Agaasimaha Interpol Asan Kasingye ayaa sheegay in halista argagaxisada ee gobolka Bariga Afrika uu yahay mid taagan loona baahan yahay in laga feejignaado.
Dhoolatuskan oo bilowday afartii bishan ayaa waxa uu noqonayaa mid ka mid ah horumarka ay gaartay dowlada Soomaaliya oo ay kagta muuqanayso saaxada caalamka maadaama haatan dalka Soomaaliya dowlad rasmi ah leedahay.
Hase ahaatee ciidamo Boolis ayaan lahayn qaar kamid ah degmooyinka dalka Soomaaliya iyadoo adeegyadii ay ciidamada Booliska u qaban jireen shacabka ay haatan qabanayaan ciidamada Milatariga .
Qabanqaabada Mudaaharaad looga soo horjeedo Madaxweyne Xasan Sheekh oo London ka socda